နည်းပညာနှင့်ခရီးသွား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > နည်းပညာနှင့်ခရီးသွား
အင်တာနက်ကိုနေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်. အင်တာနက်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းထားပြီးကျနော်တို့မရှိတော့အင်တာနက်ကိုမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်မပြောတတ်တောင်မှအဖြစ်. လက်တွေ့မပါသည့်နည်းပညာအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်နေဆဲသောငါတို့ဘဝတွေကို၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်အင်တာနက်ရှိပါတယ်. ဤသည်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားလာသို့မဟုတ်သူခစျြတဲ့သူလူများအတွက်အထောက်အကူပြုသည့်အကြောင်းရင်းများဖြစ်နိုင်သည်သမျှများအတွက်မြင်နေတဲ့နေရာအသစ်ရှာကြသည်ထားပြီး. ဘွတ်ကင်ရုံကလစ်ပျောက်ယခု, ဒါကြောင့်ရထားဖြစ်, သို့မဟုတ် လေယာဉ် သို့မဟုတ်ပင် ဘတ်စ်ကား ကြောင်းကိစ္စများအတွက်. ရှိပါတယ် ရထား-ဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက်များ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်နေရာတိုင်းကနေဘွတ်ကင်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးရာ.
နည်းပညာကမ္ဘာကြီးကိုအလွန်သေးငယ်တဲ့ပုံပေါက်စေတော်မူပြီ. ငါနိုင်ငံတကာကတဲ့နေရာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်မယ်ဆိုရင်အချိန်ရှိခဲ့သည်, ငါသက်ဆိုင်ရာရာအရပ်ကိုရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့လိုအပ်သောကြိုတင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်အရပျ၌နထေိုငျသောမိတျဆှေသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်မယ်လို့, သူတို့ကိုငါဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ပေးရမည်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုမမေးလိမ့်မယ်. ထိုအခါခရီးစဉ်အေးဂျင့်ပုံသို့ကြွတော်မူ. ငါတို့အဘို့အကဖြစ်လာခဲ့သည် လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ ငါ့ခရီးစဉ်အေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်မယ်လို့ဘယ်မှာ, အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြ ငါ၏အအစီအစဉ်များ သူသို့မဟုတ်သူမအရပ်ဌာန၌လိုအပ်သောအမှုအရာရတဲ့နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့. ယခုအင်တာနက်နှင့်နည်းပညာ, ငါအရာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို. ငါပြုသမျှအားလုံးသည်အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလုပ်နှင့်အင်တာနက်ကျော်အွန်လိုင်းသွားနှင့်သက်ဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များစစ်ဆေးနှင့်စာအုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီစာအုပ်တွေကိုလေယာဉ်အဘို့ဖွစျနိုငျ, ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီး, ရထားသို့မဟုတ်နေဖို့ပင်နေရာတစ်နေရာ. ရရှိနိုင်ရထား-booking ဝက်ဘ်ဆိုက်များပင်၏အတိုဆုံးအဘို့ရှိပါတယ် ခရီး. ခရီးစဉ်အေးဂျင့်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းအရပ်ဌာန၌အင်တာနက်နှင့်နည်းပညာမလိုအပ်တဲ့ဖြစ်လာသည်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ် ဒေသခံအားလပ်ရက် သို့မဟုတ်တစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အားလပ်ရက်, အရပ်ချိတ်ဆက်ဘာမှများအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းအွန်လိုင်းဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်. လေယာဉ်ဘွတ်ကင်ဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်, ထိုအခါ ရထားဘွတ်ကင် ရရှိနိုင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ပင်ဘတ်စ်ကားဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက်များ. ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြောက်မြားစွာဖြစ်လာကြပြီးတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုအဖြစ်ဝေးစျေးနှုန်းများစိုးရိမ်နေကြအဖြစ်ပင်လည်းမရှိ. တူများအတွက်စျေးနှုန်း ဟော်တယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီးအခန်းတစ်ခန်း၏တူညီသောမျိုးနှင့်အတူအချို့သောလျှော့စျေးသို့မဟုတ်အခြားပူဇော်သက္ကာဘို့ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်.
Lille to London Train လက်မှတ်တွေ
ရထားဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနောက်ဆုံးတော့တစ်ခုသက်ရောက်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီ. ဝက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခု umpteen အရေအတွက်ကရှိကွောငျးအတူတူပင်ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အကြောင်းရင်း, နိုင်ငံတိုင်းအနည်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူ. ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သောလိုအပ်နေသည်ဟုဆိုခရီးအားဖြင့်ခရီးထွက်ခံရဖို့ကြောင်းအောင် မီးရထားကြိုတင်ဘွတ်ကင်နိုင်ပါသည်, ကောင်းစွာရှေ့တော်၌ထိုခရီးသွားနေ့စွဲ. ထို့ကြောင့်သင်၏အကြံအစည်ကြောင့်ထိုင်ခုံများကိုမရရှိနိုင်ရန်မလွယ်ကူကြသည်မဟုတ်သေချာ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftechnology-and-travel%2F%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#နည်းပညာ #ချစ်သူ #။ .ရာဝတီ ခရီးသွား ခရီးသွား